आहुति | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Saturday, 15 August, 2020
यो संविधानमा टेकेर समाजवाद ल्याउने कुरा नै हास्यास्पद access_timeपुस १४, २०७६
समाजवाद वर्गीय व्यवस्था हो । सबै वर्ग मिलेर समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन । शोषक र शोषितहरु मिलेर समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा यो दुनियाँमा कहिल्यै हुने कुरा होइन । यो समाजवादको अवधारणा पनि होइन । हिटलर, मुसोलिन, अरेवियनहरुले भनेको अरब समाजवादको जस्ता र इन्दिरा...
पुँजीवादी क्रान्तिबिना आएको पुँजीवादले जात व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्न सक्दैन access_timeबैशाख ३०, २०७६
मान्छे जन्मिदै फरक–फरक क्षमता र विशेषताका जन्मिन्छन् । यसभित्र लुकेको षड्यन्त्रालाई छोडिदिँदा वर्णका अवधारणाको मूल कुरा नै जन्मँदा नै मानिस फरक फरक जन्मन्छन् । त्यसकारण तिनीहरुको समुहबद्धता पनि फरक –फरक हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । कोही बौद्धिक काम गर्ने भएर जन्मिन्छन्...
इतिहास किन पढ्ने ? कसरी बुझ्ने ? access_timeपुस १६, २०७५
नेपालमा इतिहास भनेर जे विषयलाई लामो समयसम्म पढाइयो वा जोड दिइयो, इतिहासको दायरा त्यति मात्र हुँदो रहेनछ । इतिहास कसले लेख्यो र किन लेखियो भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि रहेछ । पहिलो साहित्यिक कृतिमा लेखक सबैभन्दा बढी व्यक्त हुन्छ भनेजस्तै, इतिहासमा पनि लेखक वा इतिहासक...